रुसले फेरि अर्को खोप बनायो, डिसेम्बरसम्ममा स्विकृत पाउने – Daunne News
प्रदेशको विज्ञप्ती बाँझियो, दसैं खर्च बुझ्दै नवलपरासीका जनप्रतिनिधि
बुटवलमा थप एक संक्रमित पुरूषको मृत्यु
दाउन्ने साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक डा. बस्यालको उपन्यास संग्रामपुर बजारमा
सञ्चारकर्मी तथा युवा ब्यवसायी दिवश सम्मानित
चितवन तेक्वान्दो संघ द्वारा तेक्वान्दोका उत्कृष्ट खेलाडीलाइ सम्मान
नवलपुरमा डिएसपी खाँण सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका १२ जना प्रहरी संक्रमित
रुसले फेरि अर्को खोप बनायो, डिसेम्बरसम्ममा स्विकृत पाउने
By Daunne News	 Last updated Oct 17, 2020
एजेन्सी । रूस खोप निर्माणको दौडमा अगाडी देखिएको छ । रिपोर्टका अनुसार रसियाले कोरोना भाइरसको तेस्रो खोप पनि बनाएको दाबी गरेको छ । रसियाले अगस्टमा आफ्नो पहिलो खोप स्पुतनिक भि शुरू गरेको घोषणा गरेको थियो । अक्टुबर १४ मा, स्पुतनिक भिपछि दोस्रो खोप आयो र अब रूसको तेस्रो खोप पनि तयार गरेको छ ।
रसियाको तेस्रो खोप रूसी एकेडेमी अफ साइन्सको चुमाकोव सेन्टरमा भइरहेको छ । रिपोर्टका अनुसार यो इनक्विभेटेड खोप डिसेम्बर २०२० सम्ममा स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ र यो खोप नोभोसिबिस्र्क, सेन्ट पिटर्सबर्ग र किरोभको चिकित्सा सुविधाहरूमा पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणको लागि अनुमोदित भएको छ ।
पहिलो चरणको अवधिमा यो खोप ६ अक्टूबरमा १५ जना स्वयम्सेवकहरूलाई दिइयो र तीमध्ये कुनै पनि गम्भीर साइड इफेक्टहरू देखिएन । यस खोपको दोस्रो चरण अक्टोबर १९ मा २८५ स्वयम्सेवकहरुबाट सुरु गरिनेछ । यो खोपको क्लिनिकल परीक्षण डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने आशा गरिन्छ ।
रसियाले यसको कुनै पनि खोप विस्तृत रूपमा प्रयोग गरेको छैन। रसियाको पहिलो खोप स्पुतनिक भि एडेनोभायरस भेक्टरमा आधारित छ । रसियाका राष्ट्रपति पुतिनकी छोरीले पनि यो खोप परीक्षणमा समावेश गरी सकेकी छिन् । हाल यो खोप १३,००० स्वयम्सेवकहरूलाई दिइदैछ ।
उही समयमा, रूसको दोस्रो खोप एपिवाकोरोना एक कृत्रिम खोप हो र स्पुतनिक भिलाईभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । यस खोपले भाइरस प्रोटिनको सानो सिंथेटिक पेप्टाइड टुक्रा समावेश गर्दछ । जुन प्रतिरक्षा प्रणालीले भाइरस पहिचान गर्न र विना कुनै पनि असर नगर्ने बताइएको छ । यसको परीक्षण १०० स्वयंसेवकहरूमा गरिएको छ ।
रसियाका उपप्रधानमन्त्री तात्याना गोलिकोवा र प्रमुख सेनेटरी डाक्टर अन्ना पोपोवालाई पनि एभिवाकोरोनाको प्रभावकारिता जाँच्न खोप दिइयो र दुबैले यसको कुनै साइड इफेक्ट भने सकेको छैन ।
एपीभ्याककोरोनाको ६०,००० डोज चाँडै नै तयार हुनेछ । यो खोपको निर्माता भेक्टर सेन्टरले ४०,००० स्वयम्सेवकहरुमा पोष्ट रजिष्ट्रेसन क्लिनिकल परीक्षण शुरू गर्नेछ । यसको खोप यसको क्षमता जाँच गर्न ६० बर्षभन्दा माथिका १५० मानिसहरूलाई दिइनेछ । १०० स्वयम्सेवकहरू यस खोपको प्रारम्भिक क्लिनिकल परीक्षणमा पनि संलग्न थिए ।
उडिरहेका दुई विमान आपसमा ठोक्किए, पाँचको मृत्यु
कोरोना संक्रमति ट्रम्पले भनेः केही दिन वास्तविक परीक्षाको घडी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प दम्पती कोरोना संक्रमित
प्रदेशको विज्ञप्ती बाँझियो, दसैं खर्च बुझ्दै नवलपरासीका…
कार्तिक ८, १४:१७
कार्तिक ८, १४:११
कार्तिक ८, १३:२४
कार्तिक ८, १३:१५
दाउन्ने साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक डा. बस्यालको उपन्यास…
कार्तिक ८, १०:३७
कार्तिक ८, १०:२२
कार्तिक ८, १०:१९
कार्तिक ७, २३:२६